Dhageyso:- kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Oo Maanta Furmaya. – SBC
Dhageyso:- kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Oo Maanta Furmaya.
Posted by SBC Editor on Apriil 27, 2015 Comments
Saacadaha soo socda ee maanta ayaa lagu wadaa in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu daaha ka rogo, kalfadhiga lixaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furi doona kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka maanta oo isniin ah, iyadoo horay Guddiga joogtada ee Baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalfadhiga furmayo 27-ka April oo maanta ku beegan.
Xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur ayaa sheegay in Kalfadhigan uu ka duwan yahay kalfadhiyadii hore, waxaana uux usay in ajandayaal fara badan uu hor-yaallo baarlamaanka.
“Waa kalfadhigii lixaad ee uu Baarlamaanka sameeyo waaye, runtii ajandayaal badan ayaa Baarlamaanka horyaalla, waxaana rajeynayaa in howlo badan oo sanadka 2016-ka quseeya ay soo saaraan, runtii shir guddoonka ayaa soo gudbin doono waxyaabaha mudnaanta la siin doono”ayuu yiri Xildhibaan Cilmi.
Sidii caadada aheyd, waxaa dib u bilaabmay xirnaanshaha wadada horumarta Xarunta Golaha shacabka oo saaka waxaa lagu jaray wadada gaadiidka ciidamada Booliiska oo amniga halkaasi ka xaqiijinaya.
Kalfadhigaan Baarlamaanka Soomaaliya waxaa horyaallo shaqooyin kala duwan oo ay ugu horeyso arimaha ku aadan Federaalka iyo dhismooyinka ku socda Maamulada Gobolada dalka Soomaaliya, ansixinta shuruucyo kala duwan iyo hiigsiga 2016-ka ee dalka Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka qaar ayaa ka maqan dalka oo qaarkood dibada ayeey ku maqan yihiin, halka qaarna ay ku maqan yihiin Gobolada ay kasoo jeedaan.
Hoos Ka dhageyso warbixin wariye Xasan Cowke Ka soo diray Muqdisho.